Ahoana ny fikajiana ny marika diso
Math Statistika tsy manara-penitra
Ahoana no fikajiana ny marika diso?
Inona ny mari-pandrefesana ho an'ny fanadihadiana hevitra?
Imbetsaka ny biraom-pifidianana politika sy ny antontanisa momba ny antontan'isa no mamaritra ny valiny amin'ny fahadisoana. Tsy mahalana ny mahita fa ny fitsapan-kevitra iray dia milaza fa misy ny fanohanana ny olana na ny kandidà amin'ny ampaham-bola sasantsasany amin'ireo namaly, plus plus minus ainsièrent. Io fehezanteny miavaka io sy ny minus io no marika diso. Fa ahoana ny isan'ireo mari-pototra diso? Ho an'ny fomban-javatra tsotra iray mitovitovy amin'ny vahoaka be dia be, ny sisintany na ny fahadisoana dia tena famerenana ny habetsaky ny ohatra ary ny habetsahan'ny fatokisana nampiasaina.
Ny fehezan-teny ho an'ny fahadisoana diso
Amin'ny manaraka dia hampiasa ny rofia ho an'ny mari-pandrefesana. Hanao drafitra ho an'ny tranga ratsy indrindra isika, izay tsy azontsika an-tsaina hoe inona marina ny fanohanana marina ny olana amin'ny fitsapa-kevitra. Raha toa ka manana hevitra mikasika io isa io isika, angamba amin'ny alàlan'ny angon-drakitra teo aloha dia hiafara amin'ny fahadisoana madinika.
Ny formulaie izay hampiasaintsika dia: E = z α / 2 / (2√ n)
Ny Level of Confidence
Ny ampahany voalohan'ny fampahalalana izay ilaintsika hanisana ny mari-pamantarana dia ny famaritana ny haben'ny fahatokisantsika. Ity isa ity dia mety ho isan-jato latsaky ny 100%, fa ny ambaratonga matanjaka indrindra dia 90%, 95%, ary 99%. Amin'ireto telo ireto ny 95% dia ampiasaina matetika indrindra.
Raha manaisotra ny tahan'ny fahatokisan-tena avy amin'ny iray isika, dia hahazo ny lanjan'ny alpha, nosoratana amin'ny α, ilàna ny rôbôla.
The Value Critical
Ny dingana manaraka amin'ny fikajiana ny marika na ny hadisoana dia ny mahita ny sanda manan-danja.
Izany dia asehon'ny teny z α / 2 ao amin'ny formulaie etsy ambony. Hatramin'ny nandinihanay santionan-tsivana tsotra amin'ny vahoaka be, azontsika ampiasaina ny fizarana ara-dalàna ny z- scores.
Eritrereto hoe miara-miasa amin'ny 95% matotra isika. Tiantsika ny hijery ny z -score z * izay ny faritra eo an -z * sy z * dia 0.95.
Avy eo amin'ny latabatra, hitantsika fa ity sanda mananontanona ity dia 1.96.
Azontsika atao ihany koa ny nahita ny sanda mananontanona amin'ny fomba manaraka. Raha eritreretintsika ny α / 2, satria α = 1 - 0.95 = 0.05, dia hitantsika fa α / 2 = 0.025. Mikaroka ny latabatra isika izao mba hahitana ny z -score amin'ny faritra 0.025 eo ankavanana. Hifarana amin'ny tombam-bidy manan-danja amin'ny 1.96 isika.
Ny fahatelo amin'ny fahatokisana hafa dia hanome antsika ny soatoavina tsikera hafa. Ny lehibe kokoa ny fahatokisan-tena, ny ambony dia ny sanda mananontanona. Ny sandan'ny tsikera ho 90% ny matoky ny fahatokisana, miaraka amin'ny sandan'ny 0.10, dia 1.64. Ny hasarobidin'ny tsiambaratelo ho an'ny 99% ny matoky ny fahatokisana, miaraka amin'ny sandan'ny α 0,01, dia 2.54.
Ny isa hafa ihany no ilaintsika hampiasa ny rijan-dàlana hamahana ny elanelan'ny fahadisoana dia ny haben'ny santionany , asongadin'ny n ao amin'ny formula. Avy eo isika dia mandray ny fototr'io isa io.
Noho ny toerana misy ity tarehimarika ity ao amin'ilay rohibe voalaza etsy ambony, ny lehibe kokoa ny habeny lasibatra izay ampiasaintsika, ny kely kokoa ny marika ny fahadisoana. Ny be sy ny maro dia mora kokoa amin'ny kely kokoa. Na izany aza, satria mitaky ny loharanom-potoana sy vola ny statistika, dia misy ny faneriterena ny hamafisantsika ny habeny. Ny fisian'ny faka am-bala ao amin'ny rôles dia midika fa ny quadroupler ny halehibe dia tsy misy afa-tsy ny antsasaky ny mari-pandrefesana diso.
Ohatra tsy ampy
Mba hahalalanao ny fomba fanao, dia andao isika hijery ohatra roa.
Inona ny sombin'ny fahadisoana ho an'ny olona tsotra 900 tapitrisa amin'ny alàlan'ny 95% ny fahatokisana ?
Amin'ny fampiasana ny latabatra dia manana sanda manan-danja 1.96 isika, ka ny elanelan'ny fahadisoana dia 1.96 / (2 √ 900 = 0.03267, na eo amin'ny 3,3%.
Inona ny sombin'ny fahadisoana amin'ny fanandramana tsotra iray miisa 1600 ao anatin'ny taham-pahatokisana 95%?
Amin'izany ny fahatokisan - tena tahaka ny ohatra voalohany, ny fampitomboana ny habeny amin'ny 1600 dia manome tsinontsinona ny 0.0245 na 2,5%.
Manomeza fialan-tsiny azo antoka ho an'ny olona iray rehefa fantatrao Sigma
Inona ny ANOVA?
Ny fahasamihafana eo amin'ny karazana I sy ny karazana II amin'ny fitsapana hosoka
Manatsara ny fandaminana fahatokisana ho an'ny dikany
Fahadisoana fahatokisana efatra
Ohatra momba ny fifehezana ny fahatokisana ny heviny
Statistika: Degrees of Freedom
Ohatra an'ny Test Permutation
Ohatra iray amin'ny fitsapana Chi-Square ho an'ny fanandramana maromaro
Nahoana no tsy mety mandà ny fitsapana hipotisy?
Revolisiona Amerikana: Jeneraly Sir Henry Clinton
16 Quotes Christmas Inspirational
Biographie an'i Nicolaus Otto sy ny Engine ankehitriny
Lake Forest College GPA, SAT sy ACT Data
Jereo ny Fomba fijerin'ny famakiana ny lohahevitra amin'ny lalao baolina kitra ao amin'ny baolina kitra
Elektra vs. Bullseye: Iza no nandresy?
Jesosy Kristy - Tompo sy Mpamonjy izao tontolo izao
5 Torohevitra Hanatsarana ny Famakiana ny Famakiana
Classic Mechanics, fototra ho an'ny Advanced
Ny fahitana ny fahafatesan'ny anjely
Wabash College GPA, SAT sy ACT Data
Ny toerana tsara indrindra telo hanombohana ny asa fanaovan-gazety ataonao
Lisitry ny opera nataon'i Giuseppe Verdi
Ny fanambadiana silamo dia fifanarahana ara-dalàna, fantatra amin'ny anarana hoe Nikah
Ahoana no nahafatesan'i Will Rogers?
Ny Baby Boom sy ny hoavin'ny toekarena
Top 10 Pop Artists 2013 - Ny Hazo sy ny Lova
Visa G-4 ho an'ny asa fampandrosoana iraisam-pirenena sy ny EEUU
The Art of the Dart - Fidio ny tsara indrindra ho anao
Inona ny "kedo" amin'ny sazy Japoney?
Katolika Katolika tamin'ny taonjato fahadimy
Mampiasa cookies amin'ny PHP